The Voice 7-3 ~ ဒီမိုဝေယံ
The Voice 7-3
၂၀၁၁နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံနိုင်ပါစြေေ...
မြန်မာပြည်တွင်း ရဟန်းတော်များ၏ ပြည်ပထွက်ခွာ၍ ပညာသင...
ဘုရားအနေကဇာတင်ပွဲ၊ နှစ်သစ်ကူး ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပဲ...
ယနေ့ ဘဘဦးတင်ဦးနေအိမ်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ လူထုခေါင်းဆော...
ရွှေဂုံတိုင် အဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ ပြုလုပ်မည့် လွတ်လပ်ေ...
Time Magazine ရဲ့ ယခုလ မျက်နှာဖုံးမှာ လူထုခေါင်းဆေ...
နအဖရဲ့မိတ္ထီလာ လေယာဉ်တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်တဲ့ စက်ရုံစီမံက...
လတ်တလောရ တပ်ချုပ်ကြီးသတင်း..နှင့် သတင်းအတိုအထွာမျာ...
Human Rights in Burma: A Compilation of Videos fro...
ယနေ့ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ ပြုလုပ်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကေ...
ယနေ့ မြန်မာစာပေလောကတွင် ကြုံတွေ့နေရသော ပြဿနာများ.....
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီအစစ်ရရှိအောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြ...
ရန်ကုန်မြို့ St. Marry Cathedral Church မှာပြုလုပ်...
အမျိုးသားခေါင်းဆောင် တပ်မတော်၏ ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်...
မြန်မာ့တပ်မတော် ကြည်း၊ရေ၊လေ စစ်သည်များသို့ ပန်ကြား...
လိုနေတာက အကြီးစား ပြည်တွင်းစစ်.....
ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်သူတွေ ဘာတွေ ကြည့်နေကြတာလဲ...
တပ်မတော် ဆေးတက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း ဆင်းပွဲ တက...
၂၀၀၆ခုနှစ်က ပြောတဲ့ နိုင်ငံတော် အလံက ကြယ်ဖြူက ၂၀၁၀...
ကရင်ပယက ဥက္ကဌ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းနှင့် မန္တလေး ...
ခရစ်စမတ်အကြို ရန်ကုန်က ရှားရှားပါးပါး မီးရောင်စုံ ...
ယနေ့ရွှေဂုံတိုင် အဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ ကျင်းပ ပြုလုပ်တဲ...
အယ်လ်ဂျာဇီးယားရုပ်သံမှ ထုတ်လွှင့်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် AlJazeera ...
လတ်တလောရ တပ်ချုပ်ကြီးသတင်း.. ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်သတင...
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ သမတဟောင်း မစ္စတာ ကင်(မ်)ဒဲဂျူ...
The Voice ဂျာနယ်.. (7-2)
မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ လျှို့ဝှက်စီမံကိန်းများ အကြောင်...
တေဇရဲ့ စေတနာဆိုလားပဲ... (စင်ကာပူ အလည်အပတ်ခရီးတဲ့)
ရတနာပုံတယ်လီပို့ အကြောင်း ဖွင့်ဟဝန်ခံချက် (မြန်မြာ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အမေရိကန် ကေ...
နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ် အတွင်း နိုင်ငံတော်မှာ ဖွံ့ဖြိုးတ...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း အလုပ်သမားခေါင်းဆောင် ဦး...
The Voice ဂျာနယ်.. (7-1)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ တရားဝင်ရပ်တည်မှုကို ...
တရုတ်နိုင်ငံသို့ ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ် ပို့ဆောင်ခြင်းခံနေ...
ဝိုင်းဝန်းဖယ်ရှား နားမယောင်လေနဲ့ သတိထား...
Reuters သတင်းဋ္ဌာနက ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ သျှမ်းပြည်တပ်မေ...
လူတစ်ယောက်ယောက်ကို လက်သီးနဲ့ ထိုးဘို့ဆိုတာ ကိုယ့်မ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အမေရိကန် ဒ...
ဒေါ်စု ကို ပြန်မလွှတ်ရန် တရုတ် က မြန်မာ ကို အကြံပေးခ...
ယနေ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သတင်း၊ အဖွ...
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ UN ရုံးရှေ့မှာ ကျင်းပတဲ့...
အလုံမြို့နယ်မှာ ယနေ့ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆို...
မြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့ နျူးကလီးယား အစီအစဉ်များ ၀ီကီလိ(...
အနိုင်ယူလိုသူကို အရှုံးပေးလို့ တကယ် နှလုံးအေးရဲ့လား...
မနေ့က အဖွဲ့ချုပ်ရုံးရှေ့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ သံဃာေ...
ယနေ့ရွှေဂုံတိုင် အဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ လူထုခေါင်းဆောင် ...
ယနေ့ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးရှေ့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ဆွမ်း၊...
သားငယ် ကိုထိန်လင်းကို လေဆိပ် လိုက်ပို့ပြီး အဖွဲ့ချ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သားငယ်ကိုထိန်လ...
စစ်သားစိတ်မပျောက်ပဲ လူမဆန်စွာဖိနှိပ်နေတဲ့ ဗိုလ်မှူ...
ဆရာမကြီး ဒေါက်တာစင်သီယာမောင် (၅၁)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့...
လူ ၂၅၀၀ ရရင် ဗမာတွေ အလင်းပွင့်ပြီ...
ယနေ့ တောင်ဒဂုံရှိ HIV ဝေဒနာရှင်များ ဂေဟာသို့ ပြည်တ...
တရားမဝင် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ လူပုဂ္ဂိုလ်များ...
“ကျေးဇူးတင်လွှာ” တဲ့ ဗျား"
ယနေ့ ဒီဇင်ဘာလ(၅)ရက်နေ့ တောင်ဒဂုံရှိ HIV ဝေဒနာရှင်မ...
ဗိုလ်ခင်ညွန့် အပိုင်း (၂) အသံဖိုင် အပြည့်အစုံ...
မြန်မာ့ရေတပ်နှင့် တပ်သားသစ်ပြဿနာ- အပိုင်း(၂)
"မြန်မာ့ရေတပ်နဲ့ တပ်သားသစ်ပြဿနာ- အပိုင်း (၁) ”
ဒီဇင်ဘာ ၃ရက်နေ့ရ အဖွဲ့ချုပ်သတင်း.. အမေစုသတင်းများ....
မန္တလေးဂရုဏာရှင်များအဖွဲ့မှ ဂီရိလေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့ ဒေသ...
မိဘနဲ့တူသောအစိုးရ ( အပိုင်း ၁ + အပိုင်း ၂ - နိဂုံး...
ယနေ့ရွှေဂုံတိုင် အဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ ပြုလုပ်တဲ့ WORLD...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ပတ်...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် WORLD AIDS DAY အထိမ်...
မနက်ဖြန် ဒီဇင်ဘာလ (၂)ရက်နေ့ ရွှေဂုံတိုင် အဖွဲ့ချုပ်...
မင်းဆွေ(သို့) ဖားတစ်ကောင်ရဲ့ သရုပ်မှန်
ယနေ့ရွှေဂုံတိုင် အဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ ပြုလုပ်တဲ့ နှစ်(...
ယနေ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သားငယ...
၂၀၁၀ခုနှစ် ကမ္ဘာ့အတွေးအခေါ် ပညာရှင် အယောက် ၁၀၀တွင် ပ...
သမိုင်းပါမောက္ခ ဆရာကြီး ဒေါက်တာသန်းထွန်း ကွယ်လွန်ခြ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သားငယ်ကိုထိ...